दशैँको नवरात्रिमा पुजिने नवदुर्गा
1. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
2. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
3. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
4. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
5. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
6. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
7. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
8. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
9. प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना
आईतबार 1 असोज,२०७८
नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैँ नेवार मौलिकताले भरिएको चाड हो । जमरा राख्ने दिनदेखि नौ दिनसम्म मनाइने नवरात्रिका नवदुर्गा भवानीको अत्यन्तै ठूलो मूल्य–मान्यता रही आएको छ । यो नवरात्रिको समयमा नवदुर्गा भवानीका विभिन्न शक्तिपीठमा पूजा गरी बलि दिएर शास्त्रोक्त र तान्त्रिक विधिअनुसार आराधना गर्ने चलन छ । बिहान उज्यालो नहुँदै, परम्परागत सांस्कृतिक बाजा बजाएर नेवार समुदाय दिनको एक पीठमा गई देवीको पूजा–आराधना गर्ने गर्छन् । एक त दशैँको समय, रमाइलो वातावरणको समय, उसमाथि बिहान सबेरै बाजाको आवाज गुञ्जिदा एकदमै रमणीय हुन पुग्छ । हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म पूजा गरी मनाइने नवरात्रिको नवदुर्गाबारे यहाँ सङ्क्षिप्तरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छुं ।
(१) शैलपुत्री : पहिलो दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन चोखोनितो गरी खोलाको बालुवा ल्याएर त्यसमा तिल, जौ, मकै छरी जमरा राखिन्छ । यस दिन नवदुर्गा भवानीको पहिलो स्वरुपको रुपमा शैलपुत्रीको पूजा–आराधना गरिन्छ । कमलको फूल र त्रिशूल धारण गरेर साँढे चढिरहेकी, अर्धचन्द्रयुक्त मुकुट धारण गरी शैलीपुत्री रुप भएकी, मनले चिताएको फल दिने महादेवका प्रिय यशस्विनी देवी, सम्पूर्ण दुःख नाश गर्ने श्री शैलपुत्री भवानीको आराधना गरिन्छ । प्राचीन ग्रन्थका अनुसार जगदम्बा भगवतीले सत्य युगमा सतीदेवीको रुपमा जन्म भई पुनः हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीको रुपमा जन्म लिएकी शैलपुत्री नामले प्रसिद्ध भइरहेकी छिन् । शैलपुत्रीलाई हेमवती पनि भन्ने गरिन्छ । शैलपुत्रीको विवाह महादेवसँग भएको थियो । शैलपुत्रीको आराधना गर्दा साधकले आफ्नो मनलाई मूलाधार चक्रमा केन्द्रित गरी आह्वान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा योग साधना प्रादुर्भाव हुन जान्छ ।
(२) ब्रह्मचारिणी : नवरात्रिको दोस्रो (द्वितिया) का दिन नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरुपको रुपमा रहेकी ब्रह्मचरिणी भगवतीको महिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । ब्रह्म शब्दको अर्थ तपस्या र चारिणीको अर्थ आचरण हो । तपस्या गर्ने आचरण भएकीले ब्रह्मचारिणी देवी भनिएको हो । दक्षप्रजापतिकी छोरी सतीदेवी पार्वतीको रुपमा जन्म लिएपछि महादेव पति पाऊँ भनी तपस्या गरेकीले ब्रह्मचारिणी भनिएको हो । ब्रह्मचारिणीको बाहन छैन । सेतो वस्त्र लगाई कमलको फूलको गहना लगाएर जपमाला, कमण्डलु धारण गरेकी ज्योतिर्मय रुपकी कहिल्यै नाश नहुने अक्षय वरदान दिने ब्रह्मचारिणी भगवतीलाई सम्पूर्ण सिद्धि र बुद्धिको लागि आराधना गरिन्छ । ब्रह्मचरिणीको आराधनाले तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार र संयमको वृद्धि हुन्छ भनिन्छ ।
(३) चन्द्रघण्टा : नवरात्रिको तेस्रो दिन आश्विन शुक्ल तृतियाका दिन नवदुर्गा भवानीको तेस्रो शक्तिको रुपमा प्रादुर्भाव भएकी चन्द्रघण्टा भगवतीको महिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । शिरमा अर्धचन्द्रयुक्त घण्टा आकारको मुकुट धारण गर्ने भएकीले चन्द्रघण्टाका नामले प्रसिद्ध भएको हो । स्वर्णमय दिव्य शरीर भएकी, दश हात भएकी, विभिन्न शस्त्रअस्त्र धारण गरेकी, सिंहमा सवार भएकी, भक्तका दुःखकष्ट एवं शत्रु निवारण गरी रक्षा गर्ने चन्द्रघण्टा भगवतीलाई बारम्बार प्रणाम गर्दै प्रार्थना गर्छन् ।
(४) कुष्माण्डा : नवरात्रिको चौथो (चौथी) का दिन नवदुर्गा भवानीको चारौँ शक्तिको रुपमा प्रादुर्भाव भएकी कुष्माण्डा भगवतीको पनि ठूलो महिमा छ । सूर्यको जस्तै तेज भएकी, आठ हात भएकी कुष्माण्डा भगवतीको उपासनाले रोग र शोक नहुने जनविश्वास छ । अट्टहास गर्दा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र विनाश गर्ने शक्ति भएकैले कुष्माण्डा भनिएको हो । सिंहवाहिनी भई कमण्डलु, धनु–वाण, कमलको फूल, अमृतले भरिएको कलश, चक्र, गदा र जपमाला धारण गरिरहने कुष्माण्डा भगवतीलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न साधकले उपासना गर्छन् ।
(५) स्कन्दमाता : नवरात्रिको पाँचौं (पञ्चमी) का दिन नवदुर्गा भगवतीको पाँचौँ स्वरुपको रुपमा प्रादुर्भाव भएकी शक्तिस्वरुपा स्कन्दमाता हुन् । स्कन्दमाता भगवतीले मोक्षको द्वार खोलेर सबै इच्छा पूरा गरिदिन्छिन् । कमलको फूलको आसनमा बस्ने श्वेतवर्ण, तीन नेत्र, चार हात भएकी स्कन्दमाताले स्कन्द कुमारलाई जन्म दिएकीले स्कन्दमाता भनिएको हो । स्कन्दमाताको शस्त्रअस्त्र भनेकै कमलको फूल हो ।
(६) कात्यायनी : नवरात्रिको छैटौँ (षष्ठी) का दिन नवदुर्गा भगवतीको शक्तिको रुपमा रहेकी कात्यायनी भगवतीको ठूलो महिमा छ । कात्यायनी भगवतीको तीन नेत्र र आठ हात छन् । कमलको फूल र तरवार नै कात्यायनीका शस्त्रअस्त्र हुन् । यो दिन कात्यायनी भगवतीको साधना गर्दा साधकको मन आज्ञा चक्रमा बस्छ । यी भगवतीलाई मोक्ष प्राप्तिका लागि उपासना गरिन्छ ।
(७) कालरात्रि : नवरात्रिको सप्तमीका दिन नवदुर्गाको सातौं शक्तिको रुपमा प्रादुर्भाव भएकी कालरात्रि भगवतीको पूजा गरिन्छ । देवीको शरीर गाजलजस्तै चिल्लो र ज्यादै कालो रंग हुन्छ । तीन नेत्रबाट बिजुली चम्केझैँ ज्योति निस्किरहेको हुन्छ । नाकको प्वालबाट आगोको ज्वालाजस्तै श्वास निस्किरहेको हुन्छ भने दाँत किट्किटाइरहेको हुन्छ । कपाल फहराइरहेको हुन्छ भने घाँटीमा बत्तीको जस्तै चमक भएको माला लगाएको हुन्छ । बाघको छाला बेरेर उभिएकी, भयंकर रुपधारण गरेकी कालरात्रि भगवती गधा चढेकी हुन्छिन् ।
(८) महागौरी : नवरात्रिको अष्टमीका दिन महागौरी भगवतीको आराधना गरिन्छ । यस दिनलाई महाअष्टमी पनि भनिन्छ । महागौरी भगवतीको शरीर दूधजस्तै सेतो हुन्छ । देवी भागवतमा महागौरीको वर्णन आठ वर्षकी बालिकाको रुपमा गरिएको छ । सेतो वस्त्र र सेतै गहना लगाई सेतो साँढे चढेकी हुन्छिन् । महागौरीको चार हातको दायाँतर्फ अभय मुद्रा र त्रिशूल हुन्छ भने बायाँतर्फ डमरु र वर मुद्रा रहेको हुन्छ । महागौरीको स्वरुप अत्यन्तै शान्त र सौम्य रहेको छ । अम्बिका भगवती अत्यन्त सेतो वर्ण भएकी, पार्वती रुपधारण गरी आठ वर्ष भएदेखि नै महादेवलाई पतिको रुपमा प्राप्त गर्न हिमालय पर्वतमा कठोर तपस्या गरेकी हुन् ।
(९) सिद्धिदात्री : नवरात्रिको नवमीका दिन नवदुर्गा नवौं रुपमा प्रादुर्भाव भएकी शक्ति स्वरुपाको नाम हो सिद्धिदात्री । यो नवमीलाई महानवमी पनि भनिन्छ । देवी पुराणका अनुसार महादेवले भगवती देवीको आराधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेकीले तिनै देवीलाई सिद्धिदात्री भनिएको हो । सिद्धिदात्री सुनजस्तै चम्केर सौन्दर्यमयी भई सदा सौम्य र शान्त मुद्रामा बस्छिन् । चार हातमा शंख, चक्र, गदा र कमलको फूल धारण गरेकी, रातो वस्त्र पहिरी कमलको फूलमा बसेर सिंहमा आरुढ गरिरहेकी हुन् सिद्धिदात्री । अष्टमातृकाका नवौं शक्तिको रुपमा प्रादुर्भाव भएकी सिद्धिदात्री भगवती नवदुर्गा भवानीको प्रमुख शक्तिको रुपमा त्रिपुरा सुन्दरीको रुप धारण गर्छिन् । विशेष गरेर महानवमीका दिन आगममा अष्टमातृका देवीको आह्वान गरेर महा त्रिपुरासुन्दरी स्वरुपिणी महासिद्धिदात्री भगवतीको आराधना गरिन्छ ।
दशैँको नवरात्रिभरै पूजा गरिने विभिन्न देवीको शक्ति रुपहरुको आ–आफ्नै पहिचान र विशेषता हुन्छ । विभिन्न विशेषतामा पनि भगवती देवीका अनेक रुपमा एउटै सार भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय, अन्यायउपर न्यायको विजय र असुरउपर सुरको विजय नै हो । हरेक वर्ष प्रतिकात्मक आराधनाका लागि दशैँ चाड मनाउने गरिन्छ ।
सम्बन्धित समाचारथप सामाग्री
भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थविरको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्ठि
नवनियुक्ति आईजीपी थापामाथि चुनौतिका चाङ
चमेलिया नदीमा बगेका बालक भारतमा मृत फेला
शरीरको कदले नदिएपछि डाक्टर बनेँ
निजी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा पुनः सञ्चालन
लालायन्स क्वलद्धारा धापाखेलमा वृक्षारोपणपण
ताइवान मामलाले अमेरिका र चीनबीच युद्धको खतरा
आलमको मुद्दामा आज पेसी
एआईजी डा. आशा सिंहमाथि अनुसन्धान गर्न समिति गठन
सइ डिआइजी भए, सशस्त्र कर्मचारीमा नैराश्यता
विश्वासको मत प्रस्ताव टेबल गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्य
विराटनगर विमानस्थल भोलिबाट मात्र खोल्ने तयारी
Satdobato 15, Lalitpur, Bagmati, Nepal
खोजतलास - Khojtalash Online
ठमेलको होटलमा मृत भेटिए जर्मन नागरिक
उद्योगी कृष्णलाल महर्जनलाई पितृ शोक
माघको पहिलो या दोस्रो हप्ताभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी नयाँ तालिका आउँछः विश्वकर्मा
© २०२१ khojtalash media सर्वाधिकार सुरक्षित